DAQIIQADA XILLIGA NAAS NUUJINTA IYO UURKA: SIDEE AYUU U SAAMEEYAA HOOYADA IYO ILMAHA, MIYUU CUNI KARAA GW BILAHA KOWAAD IYO KAN LABAAD IYO SIDA LOO KARSADO SIDA RAASHIN DHADHAN LEH? - BEER CAGAARAN
Tijaabooyinka isticmaalka tuunbada xilliga uurka iyo naas-nuujinta. Talooyin dhakhtarrada iyo cuntooyinka raashinka leh
Hooyada uurka leh waqtiga uurka waxay si dhow ula socotaa caafimaadka. Ka dib dhalashada cunuggu wuxuu raacaa nafaqo habboon. Ka dib marka la eego, sheyga hoose ama waxyeelada waxyeelada leh ayaa isla markiiba saameyn ku yeelan doonta caafimaadka ilmaha. Iyadoo kaftan aan rabin.
Nafaqeeyayaalku waxay yiraahdaan: Naagta uurka leh ee haweeneyda uurka leh waa inay cuntadu hodan ku tahay borotiinka si sahlan loo cuno.
Waxyaabahan waxaa ka mid ah tayo fiican - ilo qiimo leh oo fitamiino ah, walxo macdanta ah iyo asiidhyo amino oo muhiim ah. Xaaladdan, ma noqon doonto mid aad u macquul ah in la cuno miraha iyo khudaarta, gaar ahaan kuwa aan tayo lahayn. Maqaalkani wuxuu faahfaahin ka bixinayaa isticmaalka tuunbada xilliga uurka iyo naas-nuujinta, wuxuu bixiyaa talooyin dhakhtarrada ah iyo cuntooyin raashin ah oo loogu talagalay cuntada caafimaadka leh ee hooyada kalkaalinta.
Naas-nuujinta Beerjirta - Waxyaabaha qiimaha leh. Waxay quudisaa jirka haweeneyda leh macdanta waxtarka leh, fitamiinada, asiidhyada kiimikada muhiim u ah caafimaadka. Ilmuhu sidoo kale wuxuu helaa walaxahan iyada oo loo marayo caanaha.
Doodhku wuxuu ka kooban yahay fiitamiino, waxay taageersan yihiin jirka hooyada inta lagu jiro fitamiin yaraanta:
Vitamin B1 (thiamine);
Waxaa intaa dheer, jeexjeexyada kaabajka ah waxaa ku jira dhowr macro iyo miiqooyin: kalsiyum, potassium, magnesium, iodine, manganese, selenium, copper, chlorine, zinc, birta, fosfooraska, sodium. Macdanta ayaa hagaajiya nidaamka difaaca.
Ha iloobin macdanta macdanta, pectin, enzymes, biotin, fibre, choline, acids-fatty acids. Waxay leeyihiin saameyn togan ku leh mareenka caloosha iyo mindhicirrada, beerka, kelyaha, iyo qanjidhada mammary ee dumarka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan halbeegga iyo kalooriinka kalooriyada waxaad ka baran kartaa maqaalkeena.
Ma suurtagal in la cuno khudaarta?
Inta aad uurka leedahay
Wakhtigan, tayo lahayn, iyo xitaa u baahan tahay in la cuno. Wixii jirka ka mid ah haweenka uurka leh, khudradda waa mid faa'iido leh.
Aan tufaaxa waxaa ka mid ah:
Phosphorus waxay saameeysaa sameynta habka lafaha ilmaha. Sidoo kale ma oggola hooyada in ay dumiso.
Potassium wuxuu xoojiyaa muruqyada wadnaha.
Birta waxay taageertaa hemoglobin caadi ah, sidaas darteed waxaa ka badbaadiya horumarinta dhiig-yaraanta iyo uurjiifka.
Magnesium - nooc ka mid ah xannibaadda walaaca iyo niyadjabka, taas oo muhiim u ah wakhtiga ilmanimada. Maaddadu waxay xoojisaa habka dhexe ee neerfayaasha, gaar ahaan masraxa leh vitamin B6.
Cudurka Tartronic waxay ka hortagtaa dhigista nudaha dufanka.
Folic acid waxay ilaalisaa uurjiifka dhalashada cilladaha dhalashada.
Bilaha koowaad iyo labaad GW
Nafaqeeyayaalku waxay ku talinayaan inay ku jiraan cuntooyinka dumarka inta lagu jiro jimicsiga. Si kastaba ha ahaatee, isla markiiba. Marka ugu horeysa waxaad tijaabin kartaa khudradda 2-3 toddobaad kadib dhalashada.
Qaybtu waa in aanay ka badnayn 50 garaam. Waxaa lagu talinayaa in la cuno kaabajka, caadka oo aan lahayn dhir udgoon iyo qadar yar oo milix ah. Ka dibna dhowr maalmood oo aanad isticmaalin, fiiri xaaladda ilmaha. Haddii aan la helin natiijooyin taban, waxaa haboon in si tartiib tartiib ah kor loogu qaado qeybta 100 garaam.
Mudo 2 bilood ah GW maalin kasta ee kaabashka la kariyey waxay noqon doontaa ilaa 200 garaam. Waqti ka dib, khudradda cuntada ayaa lagu dari karaa maraqyada, maqaarka, boogaha. Si kastaba ha ahaatee, ha shiilin. Dabcan, isticmaalka qastu waa ka hortag. Xadgudubka sidoo kale lama soo dhawaynayo.
Dheefta hooyada kalkaaliyaha iyo ilmaha
Qiimaha cuntada cuntada, iyo sidoo kale saameynta jidhka, ayaa lagu xisaabiyaa iyadoo ku saleysan ka kooban. Sidaa darteed, sifooyinka faa'iido leh ee aan tayo lahayn shaki ku jirin.
Qodobka sare ee fitamiin C wuxuu adkeeyaa nidaamka difaaca, wuxuu yareynayaa suurtagalnimada cudurrada fayraska iyo cudurada faafa.
Beerjiruhu wuxuu hoos u dhigaa kolestaroolka aan loo baahnayn. Waxay caadi u tahay qayb ka mid ah maaddada lipids.
Waxay bixisaa ka hortagga kansarka naasaha.
Dhakhaatiirtu waxay kugula talinayaan khudradda cagaarka ah ee ka hortagga culeyska. Inkasta oo kaydka macdanta ee ballaaran, badeecadu waa kaloori hooseeya. 100g, waxaa jira 30 kcal oo keliya.
Fiber wuxuu caadi u yahay dheef-shiid kiimikaad, xiidmaha. Haddii haweeney dhalatay ka dib dhalmada ay dhibaato ka haysato kursiga, markaas alaabtaasi waxay ku caawin doontaa inay xalliso.
Ilmaha, waxaa muhiim ah in tufaaxu uu yahay khudradda hoose ee alerjiga. Dareen-celinta xasaasiyadeed waa mid dhif ah.
Faa'iido kale oo loogu talagalay dhallaanka - badeecadu ma keenayso colic iyo abuurista gaas sare ee xiidmaha. Carruurta yaryar, tani waa wax caadi ah.
Waxaad ku ogaan kartaa sida saxda ah ee loo yaqaan "tufaaxa" ee cunnuga cuntada ku jira maqaalkan.
Waa suurtagal in la isticmaalo jelanji hooyooyinka qaba cudurada:
Mareenka dhuunta, xajmiga jidhka, xannuunka pancreatitis, boogaha;
acid acid ee sii kordhaya;
Dhibaatooyinka nidaamka jimicsiga;
Sidoo kale, ma cuni kartid khudradda leh dulqaad shakhsi ah. Waa lagama maarmaan in la diido alaabada haddii finan xasaasiyadeed ama maqaarka maqaarka ilmaha la ogaado. Marka ilmuhu uu bararayo, colic, mindhicirrada mindhicirka, ka saar qudaariyaha oo ka socda menu haweeneyda. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan guryaha waxtarka leh iyo kuwa waxyeellada leh, iyo sidoo kale ku saabsan cudurrada loo isticmaali karo qashin qubka, halkan ka akhri.
Sida loo kariyo - tallaabo tallaabo tallaabo ah
Cuntada haweeneyda uurka leh waa inay ahaato mid dhammeystiran oo isku dheelitiran.. Khudaarta iyo miraha - qeybta ugu weyn.
Fikrad ahaan marka ay liiska cuntada dumarka uurka leh ay noqon doonto ½ qalabka dhirta.
Dumarka uurka leh
Nidaamka qaadista ilmaha ma aha cudur kaas oo cunto loo qoro. Cunto maalinle ah lagama maarmaan ma'aha inaad si isdaba-joog ah is-bedesho Waxaa lagama maarmaan ah in diirada la saaro oo keliya odhaahyada faa'iido leh ee alaabta, iyo ma aha oo kaliya on delicious.
Caanaha dufanka yar - 80 ml;
subagga - 20g;
jiis adag - 30-40g;
bur-burka - 25g;
kareecada - 30g;
Madaxa madaxayga kaabajka ah, loona burburiyo inflorescences.
Karkari biyo cusbaynaya illaa badh diyaarsan. Ilaa 7-10 daqiiqo.
Waqtigan xaadirka ah waxaan isku diyaarineynaa suugo creamy ah: isku dar digirta digsi ilaa dahab ah. Waxaan ku darnaa caanaha, labeen dhanaan iyo qayb ka mid ah jiiska. Ka dib markii la kariyo, iska daa.
Marka Kaabashka la kariyo, waxaad u baahan tahay inaad ku dahaariso dareeraha xad-dhaafka ah.
Intaad diyaarinayso xaashida yar yar, saliida saliid. Faafi on on inflorescences, ku shub suugo, kula saydhaa leh jiiska soo haray.
U direy foornada heerkul ah 180 ° C 20 daqiiqo.
Ka dib karinta, waxaad ku rusheyn kartaa geedo yaryar.
First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah in loo qaybiyo florets iyo dhaq dhogorta.
Biyaha ku jira boorso laba ah waxay u keenaan isku karkar, ka dibna soo saar khudradda dusha sare. Dabool dabool.
Waqti karinta 10-15 daqiiqo.
Ka dib markii aan dibadda u soo saarno oo siinno dheecaan dheeraad ah si aan u daadinno.
Daadi saliid saytuun, milix. Kaabashka ayaa diyaar u ah sida saxan dhinaca.
Waxa kale oo aad ku deyn kartaa kaabajka dhameeyay oo leh qasacad si joogta ah, oo subaga ama caanaha ku dar oo u adeega miiska.
Wixii hooyada kalkaaliyaha ah iyo ilmaha, waa inaad doorataa saxuuno caafimaad leh oo ka sameysan alaabta tayada leh.
Cuntada la kariyay, la kariyay iyo suufka sigaarka waa in si dhab ah looga tagaa. Inta lagu jiro nuujinta waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro qashinka cuntada.
Maraq qudaar ah
tufaaxa 300 g;
karootada - 1 pc;
basasha - 1 pc;
baradhada - 3daab;
digir cagaar - 100 g;
kareemka marka la rabo;
Ku shub 2 litir oo biyo ah digsi oo ku rid dabka.
Ka dib markii karkariyo diraan basasha la kariyay, baradhada, karootada.
Ku kari kuleyka dhexdhexaadka ah 15 daqiiqo.
Kadibna waxaan u dirnaa kaabajka iyo digirta khudaarta, sii wadaan inay karsado 7 daqiiqo oo kale.
Dhamaadka dhammaadka karinta, ku dar milix iyo kareem.
Daadi xawaare ka hor intaadan u adeegin.
tufaaxa 500 g;
digaag digaag - 300g;
ukunta - 3 qaybood;
caanaha - 150 ml;
jiiska jiiska - 100g;
Kaabashada hore iyo hilibka.
Ka dibna inflorescences diyaar ah si fiican u cajiinka leh fargeeto ah, u rogaa galay mush.
Si yaryar u jar hilibka iyo ku dar kiniinka.
Ku dar walxahan ku dul qor xaashi.
Samee buuxsamid: caanaha qoyan oo isku qasan, ukunta, 50g oo farmaajo ah.
Salt iyo ku shub isku dar ah on sheet dubista, ka badan Kaabashka hilibka.
Ka dibna kula saydhaa farmashiyaha haray.
Dubo foornada ilaa 20 daqiiqo 150 ° C
Cuntada dhejiska waxaa loo isticmaali karaa haddii ilmuhu aanu lahayn xasaasiyad xasaasiyadeed oo ka kooban qaybaha saxanka.
Waxaad ka heli kartaa cuntooyin dheeraad ah oo ka socda qajaarka.
Haddii aad go'aansato inaad dhirto tufaaxa beertaada, waxay noqon doontaa mid waxtar leh si aad u ogaatid sida si wanaagsan loo koro, iyo sidoo kale si aad u ogaato noocyada ugu fiican ee khudaarta. Iyo hooyooyinka da'da yar, waxaan ku soo aruurinay raashinka tayo fiican ee cunuga.
Aan tufaaxa ayaa soo ururiyay tiro badan oo nafaqo ah. Iyo iyada - qayb muhiim ah ee nafaqada cuntada inta lagu jiro naas nuujinta, sababtoo ah badeecada bilowga ah ee cuntada loogu talagalay cuntada ka dib dhalmada waa yar yahay. Cuntada gabadha nafteeda iyo cunuggu wuxuu u baahan yahay in laga qaado meel ka mid ah. Isla mar ahaantaana aan waxyeello u geysan jidhka.
Goosashada, soo noqnoqota oo joogto ah oo miisaan leh - canjada Asya
Deegaanka cagaaran ee jawiga 'cawska cagaaran' wuxuu ka shaqeeyaa shirkadda American si loo soo saaro koronto
Isticmaalka kareemka liin: faa'idooyinka iyo waxyeelada
Daryeelidda orchid. Miyuu suurtogal ah in la isku qurxiyo quruxda markay timaado feerka?
Horumarinta berry yar yar: beeritaanka iyo daryeelidda geed duurka
Nasturtium kala duwan
Beer-geedeedka xilliga dayrta
Daaweynta cudurada xayawaanka
Qajaarka koraya ee lagu koriyo
Beerto iyo daryeel
Ramson Faa'iido leh
Hooyooyinka intooda badan waxay diyaariyaan sorrel jiilaalka iyaga oo u gaar ah, kuwaas oo aan had iyo jeer ha ilaaliyo caleemaha cusub iyo dhadhan fiican leh. Sidaa darteed, waxaan ka hadli doonaa siyaabaha sorrel goosashada jiilaalka, taas oo aan u baahnayn inaad ku qaadato waqti badan ama lacag badan. Sorrel qalalan Cuntada ugu fudud iyo waqti-la-isku dayey si loogu diyaariyo sorrel jiilaalka waa qalajinta. Read More
Dhirta kuleylka ah ee aan kuleylka lahayn ee Cordilina toos ah: xeerarka daryeelka guriga
Had iyo jeer cunta yaanyo "Jar Peter": sharaxaadda noocyada kala duwan, sawirrada miraha la gooyey iyo daryeelka duurka